निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रादायक कम्पनि वेबसर्फरले फाइबर तार मार्फत ग्रहाकको घरघरमा इन्टरनेट सेवाको साथमा टिभीको सुबिधा पनि पुर्याउदै आइरहेको छ। कम्पनीले 60 Mbps को स्पिडको प्याकेजमा इन्टरनेट सहित टिभी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले यस स्पिडको प्याकेज अन्तर्गत १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको योजनाअनुसार ग्राहकले इन्टरनेट जडान गर्न सकिनेछ।
वेबसर्फरको 60 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवाको शुल्क सहित बिस्तृत जानकारी
60 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
60 Mbps स्पिडको इन्टरनेटको शुल्क सम्बधि सम्पूर्ण जानकारी
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, ८३३ /-, फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २,५०० /- र फाइबर केवल रु. ५०० /- र रिफण्ड रकम रु. ५०० /- पर्छ। त्यस्तै टिभीको लागी सेट अप बक्स शुल्क रु. ३००० /- र सेट अप बक्स सुरक्षा डिपोजिट रकम (रिफन्ड हुने) रु. ५०० /- पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ६, ०१३ /-, फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ००० /-, फाइबर केवल रु. ५०० /- र राउटर सुरक्षा डिपोजिट रकम (रिफण्ड हुने) रु. ५०० /- पर्छ। त्यस्तै टिभीको लागी सेट अप बक्स शुल्क रु. २, ५०० /- र सेट अप बक्स सुरक्षा डिपोजिट रकम (रिफन्ड हुने) रु. ५०० /- पर्छ।
६ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ६ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १०, ६१४ /-, फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. १, ००० /- र फाइबर केवल रु. ५०० /- र रिफण्ड रकम रु. ५०० /- पर्छ। त्यस्तै टिभीको लागी सेट अप बक्स शुल्क रु. २, ००० /- र सेट अप बक्स सुरक्षा डिपोजिट रकम (रिफन्ड हुने) रु. ५०० /- पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १९, ८१५ /-, फाइबर राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. १,००० /- र फाइबर केवल रु. ५०० /- र रिफण्ड रकम रु. ५०० /- पर्छ। त्यस्तै टिभीको लागी सेट अप बक्स शुल्क रु. १, ५०० /- र सेट अप बक्स सुरक्षा डिपोजिट रकम (रिफन्ड हुने) रु. ५०० /- पर्छ।
ब्रोडलिङ्क सुबिसु डीसहोम वर्ल्डलिङ्क क्लासिक टेक भायनेट एनसेल नेपाल टेलिकम वेबसर्फर